Te Reo Māori/mi/explaintheknowledgeofsputteringtargetmediumfrequencymagnetronsputtering-2.html
ပစ်မှတ် sputtering ပစ်မှတ်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း magnetron sputtering ၏အသိပညာကိုရှင်းပြပါ
Magnetron sputtering တွင်အမျိုးအစားများစွာပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုစီတွင်ကွဲပြားသောအလုပ်အခြေခံမူများနှင့်အသုံးချ ၀ တ္ထုများရှိသည်။: သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်အီလက်ထရွန်တို့အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အီလက်ထရွန်များကိုပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်အနှံ့လှည့်ပတ်စေသည်, ထို့ကြောင့်အီလက်ထရွန်များသည်အိုင်းယွန်းဓာတ်ငွေ့များကိုတိုက်ထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုမြင့်တက်စေသည်။ ထုတ်လုပ်လိုက်သောအိုင်းယွန်းများသည်လျှပ်စစ်စက်၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်ရှိပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်နှင့်တိုက်မိသည်။, လူတိုင်းသည်အမြဲတမ်းသံလိုက်များကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာကြသည်, coil သံလိုက်များကိုသုံးခဲသည်။.
အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း sputtering ၏နိယာမသည်ယေဘူယျအားဖြင့် DC sputtering ၏အခြေခံအချက်များနှင့်တူညီသည်. ခြားနားချက်မှာ DC sputtering သည်စည်ကို anode အဖြစ်အသုံးပြုသည်, intermediate frequency sputtering ကိုတွဲထားစဉ်. စည်တွင်ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုအလုံးစုံဒီဇိုင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမည်, sputtering process အတွင်း system တစ်ခုလုံးနှင့် system တစ်ခုလုံး, anode နှင့် cathode တို့၏အစီအစဉ်သည်ဆက်စပ်သည်. အချိုးသံသရာတွင်ပါ ၀ င်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်. ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများသည်ကွဲပြားသော sputtering အထွက်နှုန်းနှင့်ကွဲပြားသော ion အသိပ်သည်းဆများကိုရယူနိုင်သည်။.
အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း sputtering ၏အဓိကနည်းပညာသည် power supply ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးချမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, ပိုမိုရင့်ကျက်သောနည်းလမ်းများမှာ sine wave နှင့် pulse square wave တို့ဖြစ်သည်. တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်. ပထမ, ဖလင်အလွှာအမျိုးအစားကိုစဉ်း စား၍ မည်သည့်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်မှုနည်းလမ်းသည်သင့်တော်သည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ. ရုပ်ရှင်အလွှာ, သင်လိုချင်သောရုပ်ရှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန် power supply ဝိသေသလက္ခဏာများကိုသုံးနိုင်သည်.
ပစ်မှတ်ကိုအလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းပစ်မှတ်များအတွက်သုံးသည်, အချို့ sputtering ပစ်မှတ်များသည်သုံးစုံ သုံး၍ ပစ်မှတ်များသည်အတော်လေးကြီးသည်. အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည်, workpieces အများစုကိုအချို့သောသတ္တုများဖြင့်သွန်းလုပ်ထားသည်။ ထိုဖုန်စုပ်မီးဖိုများအားယေဘူယျအားဖြင့်အတော်လေးကြီးမားသည်, ၎င်းသည်လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများစွာကိုတင်နိုင်သည်, နှင့် plated ရုပ်ရှင်ပိုထူထပ်သည်။.
Next: ITO ပစ်မှတ်များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
» sputtering ပစ်မှတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
Industrial news (382)
Shaanxi Zhongbei Titanium Tantalum Niobium Metal Material Co., Ltd မှ. isaChinese enterprise specializing in the processing of non-ferrous metals, serving global customers with high quality products and perfect after-sales service.